Wararka Maanta: Arbaco, Jun 24, 2020-Dowladda Soomaaliya oo jaamacadda Carabta horgeysay mowqifkeeda ku aadan muranka webiga Niil iyo xaaladda Libiya
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Amb, Axmed Ciise Cawad, ayaa sheegay inuu ka qeyb galay laba kulan oo Jaamacadda Carabtu kaga hadlaysay xaaladda iska horimaadka Liibiya iyo muranka biyo xireenka Niil.
Amb, Cawad, ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya taageersan tahay xalka nabadeed ee Liibiya. Ma sheegin inay dowladdu la safan tahay ama taageersan tahay dhinac kamid ah dhinacyada ku hardamaya dalka Libya.
“Sida aan ognahay webiga Nile waxa uu nolol u yahay Masar iyo Sudan, wuxuu sidoo kale arrin horumar u yahay dadka Ethiopia-da aan saaxiibka nahay, sidaas darteed waxaan ugu baaqeynaa Masar, Sudan iyo Ethiopia inay xiisadda yareeyaan oo ay dhammaan arrimaha taagan ku xalliyaan miiska wada-hadalka, islamarkaana gaaraan heshiis u wada faa’iideynaya Masar, Sudan iyo Ethiopia,” ayuu yidhi wasiir Cawad.
Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ayaa kusoo beegmaya, iyadoo dhawaan dalka Masar uu ka codsaday Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay soo dhex galaan muranka qotada dheer ee kala dhexeeya Itoobiya oo ku saabsan biyo-xireenka weyn ee Niil.
Adis-Ababa ayaa shaaca ka qaaday qorsheyaal lagu bilaabayo $ 4.6 bilyan biye xireenka bisha soo socota, iyada oo aan loo eegin in wax heshiis ah la gaadhay.
Masar iyo Itoobiya labaduba waxay ka dhawaajiyeen tillaabooyin militari oo ay ku ilaalinayaan danahooda, waxeeyna halis ku tahay inay burburaan wada hadalada.